Katsi Kukwasva, Katsi Muti Kukwasva, Katsi Matoyi - Jie Feng
Hangzhou Jie Feng Leisure Chigadzirwa Co, Ltd Is A Nyanzvi Kugadzira KwePet Zvigadzirwa MuChina Uye Inowanikwa MuPingyao Guta reHangzhou Guta. Iyo Fekitori Yakatangwa Muna 2008 Uye Tine Ruzivo Rwakawanda MuPet Viwanda. Zvatinovavarira Izvo Zvino Izvo Iyo Yakasarudzika Dhizaini Uye Yakanyanya Quanlity Kune Izvo Zvigadzirwa.
kadhibhodhi katsi imba
Isu tine yedu patent nechinhu ichi. Yakagadzirwa neye eco-inoshamwaridzika mapepa uye isu tinoisa kukwenya mapedhi zvese kumusoro uye pasi pechinhu. Iyo yakasarudzika hwema hwekadhibhodhi inokwezva katsi zvakanyanya kutamba zvine mufaro. Chigadzirwa chiri muchimiro chegungano nediki yekufambisa vhoriyamu uye inogona kuchengetedza mutengo wekufambisa wevatengi. Izvo zvimwe, zvinounza mutengi pfungwa yekuita kana wapedza kuungana.
post katsi kukwasva
Isu tine yedu patent nezvinhu izvi. Iyo inogadzirwa ne eco-inoshamwaridzika E1 nhanho MDF. Takaita iyi dhizaini pakupera kwe2019 uye inomuka kutarisisa kukuru mukuratidzwa kwechipfuwo. Iri kutengesa chaizvo muna 2020. Takaita maumbirwo akasiyana uye mazhinji mavara kuti mutengi asarudze, zvakare, kadhibhokisi kadhibhokisi rinotsiviwa. Kunze kwekukwasva, isu tinowedzera mbeva toyi kuti tiwedzere kunakidzwa kwekitsi. Kana iwe uchifarira idzi dzakateedzana, ndapota taura nesu! Tinogona kuita tsika dhizaini yako!
MDF katsi yekutamba
Isu tine yedu patent nechinhu ichi. Iyo yakaitwa ye eco-inoshamwaridzika yepamusoro E1 nhanho MDF. Isu tinobatanidza bhora uye kori kadhibhodhi pamwechete. Cat inogona kukwenya uye zvakare kutamba bhora. Zvichienzaniswa nebepa rekukwasva matoyi, isu takaita mamwe maumbirwo ezvinoteedzana izvi. Kunze kweaya akanyorwa matatu chimiro, isu tine mamwe akawanda maumbirwo. Chii chimwe, iyo yekukwasva pad iri pakati inogona kutsiva zvinoreva kuti chinhu ichi chinogara. Mutengi anongoda kutsiva chikamu chepakati icho chakachipa uye chiri nyore kubata. Kana iwe ...
Iyo reptile keji imhando yekabhineti inoshandiswa kusimudza maamphibians. Vatengi vanogona kushongedza makabati avo zvinoenderana nezvavanoda ivo, uye nekuisa marambi uye zvirimwa kuti zvipfuwo zvavo zviwane zororo riri nani. Isu tinoshandisa mabhodhi ane hushamwari uye tinokwanisa kugadzirisa hukuru hwakasiyana kune vatengi vedu. Isu takatumira kunze reptile keji kuEurope neAmerica, Australia uye ichitengesa mushe nguva dzese. Gamuchirai kubvunza kwako.
katsi rusvingo pasherefu SCW08-S
Iyo inogadzirwa ne eco-inoshamwaridzika E1 nhanho MDF. Isu takaita dhizaini uye takagamuchira mibvunzo yakawanda paWebhusaiti. Cat rusvingo pasherufu imhando yefashoni yechinhu, iyo inogona kurega katsi ive nenzvimbo yekutamba. Iyo yemhando-yakaturikidzana modelling inokodzera kwazvo kukwira kwechimiro katsi. Iyo hemp tambo ikholamu inogona kurega katsi ichikwenya nzwara dzayo. Iyo dhizaini yakakosha uye yakachipa. Yakatsigirwa uye kukosheswa nevatengi vazhinji.
Kero:2-4 Yangcheng Mugwagwa,
Pingyao Town, Yuhang Ruwa, Hangzhou
Runhare:86-187 5823 6742 / 86-178 2683 3264